China translucent film light box sary sy mpanamboatra | Lima
Ny jiro taratasy dia vita amin'ny vy tsy miaro amin'ny tontolo iainana; azo ahantona amin'ny rindrina, amin'ny peratra na apetraka eo ambonin'ny latabatra fandraisana mandritra ny hetsika na fankalazana ataonao. (manana lavaka fanalahidy ao ambadika ho mora ahantona)
1. Mamorona rivo-piainana mafana sy tantaram-pitiavana miaraka amin'ny jiro LED fotsy mafana. Hazavao ny fotoana tsy hay hadinoinao.
2. Exterior marefo: miasa ny bateria tsy misy tariby, azo antoka sy mety miaraka amin'ny ON sy OFF switch ao aoriana.
Tsy mila fivoahana, mampiasa bateria 2AAAbat ka tsy misy tadin-dokotra mitady (tsy misy bateria).
3. maharitra & mamonjy angovo & toekarena: jiro dikanteny lamaody LED, fiainana jiro LED lava, fampiasana maharitra dia tsy mafana. Exterior plastika, mafy nefa tsy mavesatra loatra.
Karazana: Jiro haingon-trano LED
Fitaovana: vy vy
Loharanon-kery: bateria 2 x AAA (Tsy tafiditra)
Karazana: Taratasy avy any A ka Z, &, isa avy amin'ny 0 ka hatramin'ny 9, fo mena.
Samy hafa ny haben'ny endriny.
Izahay dia mivarotra hazavana litera LED Marquee ihany, tsy mampiditra haingo hafa, ny lesoka fandrefesana ao anatin'ny 1-2 cm dia normal.
Fiantohana ara-bola 100%. Fiantohana mandritra ny androm-piainana, raha tsy afa-po amin'izany ianao na inona na inona antony, mandefasa maimaim-poana na avereno tanteraka.
Tongasoa eto amin'ny fivarotanay!
Hazavao ny fotoana tsy hay hadinoinao
Mamorona teny nalaina mampihomehy, manome aingam-panahy, hafatra natokana ho an'ny fotoana manokana sy fehintsoratra manokana.
Haben'ny tonga lafatra
Tsy dia lehibe loatra, tsy kely loatra.
Namboarina tamin'ny lavaka mihantona.
ON / OFF manodina eo aoriana.
Azo ahantona amin'ny rindrina ary aseho eo ambony latabatra.
[Fiarovana azo antoka & angovo]: Jiro hazavana dikanteny LED, fiainana jiro LED lava, fampiasana maharitra dia tsy mafana. Tsy misy faritra maranitra, azo antoka koa ampiasan'ny ankizy.
[CONVENIENSIARY]: Ny jiro eny amin'ny marquee nohazavaina dia miovaova be sy mora entina. Ny isa marquee tsirairay dia tsy misy tariby sy bateria. SWITCH OFF - Ny switch on / off side dia mahatonga ity mari-tsoratra marquee ity mety hampiasaina. Mampiasa bateria 2 AAA mba tsy ho be loatra izy ireo ary tsy mila ampidirina amina outlet elektrika. Izy io dia haingo lavorary amin'ny hetsika na habaka rehetra.
[Ankafizo ny Fifaliana avy amin'ny Famoronana]: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ & ❤ Jiro LED litera litera sy 0-9 isa, litera anarana, teny na fehezan-teny miaraka amin'ireo litera abidia manjelanjelatra LED ireo! TIAKO IANAO, TRANO, VADY, U & M sns, milalao fotsiny ny eritreritrao.
Teo aloha: Taratasy hazavana sarimihetsika translucent
Manaraka: Sary boaty hazavana sarimihetsika translucent